Shantii Xili Ciyaareed Ee Neymar Jr Ugu Ciyaaray Kooxda Paris Saint-Germain Ee Reer Faransiis Halkan Ka Akhriso? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Paris Saint-Germain waxay si adag ugu dhaqaaqday inay ku guuleysato horyaalkeedii 7aad ee Ligue 1 muddo sideed sano gudaheed ka hor inta uusan dhicin cudurka faafa ee coronavirus taasoo la micno ah inuu xilli ciyaareedku xidhmayo.
Kooxda Thomas Tuchel ayaa sidoo kale u gudubtay wareega 8da ee Champions League ka dib markii ay wadar ahaan labada lug 3-2 kaga badiyeen kooxda Borussia Dortmund.
Lugtii labaad ee tartankaas ayaa PSG ku garaacday 2-0 kulan ka dhacay caasimada Faransiiska iyadoo Neymar uu dhaliyay goolkii furitaanka isagoo madax naadir ah.
Waxa ay xilli ciyaareed adag ka qaadatay xiddiga reer Brazil isagoo leh 17 gool 21 kulan oo uu ciyaaray tartamada oo dhan, Halkan waxaan ku dooranaynaa shantiisii ​​xilli ee ugu sarreeyay ee 2019-20.
5- Dib u soo noqoshada Dortmund (11-kii March, 2020)
Ka dib guuldaradii lugtii hore ee wareega 16ka ee ka dhacday Jarmalka, PSG waxay u baahneyd nooca soo laabashada oo aan waligood astaan ​​u aheyd Champions League.
Waxaana ay aheyd inuu Neymar wadada toosiyo iyaga oo madaxa madaxa ka gelinaya madaxa Angel Di Maria daqiiqadii 28aad.
Juan Bernat ayaa ka dhigay 2-0 habeenkii xalay iyadoo martigaliyayaashu ay soo mareen ka hor inta aysan si faneed ugu dabaaldegin taageerayaasha ku soo ururtay bannaanka Parc des Princes, iyagoo difaacay amarrada ku saabsan coronavirus, “Waan ka walwalay kulankaan,” ayuu Neymar u sheegay NN Consultoria.
Maalmihii ka horreeyay waxay ahaayeen kuwa xasilloonaa. Laakiin waxaan aaminsanahay, in wixii intaa ka dambeeya, kooxdu ay midoobeen isla markaana ciyaartoy kasta, laga soo bilaabo kuwii ugu khibrada badnaa ilaa kan ugu yaraa, dhammaantood ay muhiim u ahaayeen guushan.
“Habeenku wuxuu ahaa mid qaas ah. Waxay u muuqatay inay yihiin Libertadores! Dadweynihii banaanka ka ahaa garoonka waxay nagu soo dhoweeyeen waddada xaflad aan la rumeysan karin.”
4 – Lyon jajaban (March 4, 2020)
Neymar ayaa ku faraxsan inuu door taageero ah ciyaaray madaama seddexleey uu dhaliyay Kylian Mbappe uu u dhaliyay PSG inay 5-1 ku garaacdo Lyon lugta hore ee Coupe de France.
Neymar iyo Pablo Sarabia ayaa sidoo kale shabaqa soo taabtay iyadoo PSG ay mar kale xaqiijisay heerkooda sarre.
“Lyon dhib ayeynu gelineynaa kulan kasta oo aan ka hortagno,” ayuu yiri Neymar.
“Natiijadu ma muujineyso sida adag ee kulankaan uu u ahaa kulankaan. Ciyaartaan waxaa iska leh Mbappe isagana muhim ayuu u ahaa guusha.”
3 – Neymar oo laba jeer sharfaya Kobe (January 26, 2020)
Markii ay soo baxeen warar sheegaya in diyaarad helicopter ah oo la xiriirta halyeeygii hore ee NBA Kobe Bryant uu ku faafiyay warbaahinta bulshada, Neymar ayaa si xushmad leh u bixiyay iyadoo PSG ay 2-0 kaga badisay Lille.
Xiddigii hore ee Barcelona ayaa furay gooldhalinta ka dib markii uu labo rigoore dhaliyay Marco Verratti ka hor inta uusan dar dar gelin qeybtii labaad ee ciyaarta, “Geerida Kobe aad ayey ii saameysay” ayuu yidhi Neymar.
Waan ku faraxsanahay inaan la kulmo isaga oo aan wax ka barto xiddiggan isboorti, oo ahaa sanam aniga ii ah. Waxaan ogaanay wixii dhacay intii lagu jiray nus-saac. Aad ayaan u murugoonay, runtii murugo badnaa. Waxay ahayd ciyaar adag iyo wararka, bedelkii ee na garaacaya, ayaa na sii ballaadhisay.
2 – Farxad haysa Lyon (Sebtember 22, 2019)
PSG ayaa seddex dhibcood oo nadiif ah ka sarreysay Ligue 1 ka dib markii Neymar uu daqiiqadii 87aad ku guuleystay Lyon.
Kooxda martida loo ahaa ayaa hor istaagtay cadaadis xoog leh oo heysata PSG laakiin wax yar ayey sameyn kareen madaama Neymar uu si qurux badan xerada ganaaxa ugu dhex toogtay geeska.
“Cadaadis badan ayaa ka jiray ciyaartan, laakiin dhamaadka ciyaarta ayaa hadafkii yimid,” ayuu yiri Neymar.
Di María waxaan ka helay marin, ilaahay mahadii, waxaan sameeyay ikhtiyaarka saxda ah aadna waan ugu farxay. Jidhkayga ayaan u rogay oo waxaan ku gaadhay lugtayda bidix. Gool muhiim ah.
1 – Aamusnaanta dhaliisha (Sebtember 14, 2019)
Ka dib markii uu seegay afartii kulan ee ugu horeysay ee Ligue 1 xilli ciyaareedkii ka dib markii uu isku dayay inuu injineer u noqdo ku laabashada Barcelona, ​​Neymar ayaa ku soo laabtay si cajiib ah.
Wuxuu caayay Parc des Princes oo aamin ah markii magaciisa la aqriyay, iyo kullamo xiisado badan dhex maray, laakiin ciyaaryahanka reer Brazil ayaa leh go’aanka ugu dambeeya.
Ciyaarta markii lagu gudajiray waqtiga dhaawaca, Neymar ayaa kusii tuuray karooskii Abdou Diallo wuxuuna kubad qurux badan ka dulqaaday madaxa si uu ciyaarta u guuleysto.
Waxa uu yidhi “Waxaan ubaahanay hadaf goolal kasto, waxay ii ahayd muhiim aniga iyo PSG Waan ogaa in gool uu badali karo taariikhda xilli ciyaareedkan, sidaa darteed waxaan ku raacdeeyay wixii aan lahaa oo dhan.
“Waxay ku dhaweyd dhamaadkii ciyaarta markii Diallo uu bilaabay kubada, ma jirin wax kale oo aan ahayn inaan tijaabiyo kubad baaskiil ah, Waxaan dhaliyay goolkan mid kamid ah yoolalka ugu muhiimsan mustaqbalkeyga.”
Muxuu Ahaa Warka Naxdinta Leh Ee PFA La Kulmeen Intii Lagu Guda Jiray Xanuunka Coronavirus?